Warartii ugu dambeesay wadahadalada maamulada Galmudug iyo Puntland ee Gaalkacyo (Warbixin)!! | kowtharmedia.com
Home WARAR Warartii ugu dambeesay wadahadalada maamulada Galmudug iyo Puntland ee Gaalkacyo (Warbixin)!!
Warartii ugu dambeesay wadahadalada maamulada Galmudug iyo Puntland ee Gaalkacyo (Warbixin)!!
Nov 15, 2016WARAR
Magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug oo ay ku dagaalameen ciidamada Galmudug iyo kuwa Puntland ayaa waxaa walli ka soconaya dhexdhexaadin laga dhex wado labada Maamul.
Hishiis dhawaan ka dhacay magaalada Gaalkacyo ayaa waxaa kala saxiixday madaxweynayaasha maamulada Galmudug iyo Puntland, waxaana kamid ahaa xabad joojin ka dhaqan gasha Mudug iyo in la dhameeyo waxyaabaha dagaalka ukeenay.
Wararkii ugu dambeeyay ee aan ka heleyno magaalada Gaalkacyo ayaa sheegaya inuu jiro isfahami-waa u dhaxeeya odayaasha dhaqanka labada maamul iyo wafdiga ra’iisul wasaaraha ee dhexdhexaadinta ka wada magaalada Gaalkacyo kadib markii odiyaal kamid ah ay wadaan isla wayni liidata.
Odayaasha dhaqanka ayaa diidan qodobada qaar ee lagu saleynayo xabad joojinta, waxaana ra’iisul wasaaraha uu la kulmay waxgaradka labada maamul ee kusugan waqooyiga iyo koofurta magaalada Gaalkacyo.
Waxgaradka qaar ayaa doonaya in xalinta khilaafka loo madax banaaneeyo si ay u dhameeyaan, sababtoo ah waxay sheegeen siyaasiyiin aan´xal rasmi ah ka gaari karin xiisada magaalada inay ku jiraan.
Mararka qaarkii waxaa galbeedka Gaalkacyo laga maqlayaa rasaas goosgoos ah, waxaana wali cad inaan la kala qaadin ciidamada isku horfadhiya goobihii lagu dagaalamay.
Warar kale ee aan heleyno waxay sheegayaan in Galmudug ay diidan tahay in wadahadalka uu socdo ilaa ciidamada isku horfadhiyaan halkii lagu dagaalamay, halka dhinaca kale Puntland ay diidan tahay in ciidamada la kala qaado, iyadoo laga baqayo dagaalo kale.
Waxaa kaloo la sheegaya in magaalada Gaalkacyo uu ku wajahan yahay ergayga gaar ka ee QM u qaabilsan Soomaaliya, si uu kulamo ula qaado waxgaradka iyo siyaasiyiinta labada maamul.
Waxyaabaha kale ee sida weyn la iskugu hayo waxaa kamid ah sida waajibaadka labada dhinac ee magaalada Gaalkacyo loo maareen lahaa iyo in la qaado xayiraadii Puntland kusoo rogtay gaadiidka ka tagaayay dhanka koofurta magaalada Gaalkacyo micnaha in Ay Putland joojiso hadalkii ahaa “Gaari Koofur wax Inooga soo qaaday ino soo gali maayo Maamulka Putland” halka dhanka kale Galmudug ay lee yihiin “maadaama idinku baahi uqabtaan Maciishadaha iyo qudaarta gaaridooda lagu keeno in labadalaa majiro”
Previous PostDAAWO MUUQAAL: Xildhbaan Axmed Dayib Ka dhex Aadamey, Golaha Baarlamaanka Ee ISRAEL iyo Waxa dhacay! Next PostGuddiga doorashooyinka Hirshabeelle oo soo saaray shaxda 1aad ee doorashada Aqalka Hoose (Akhriso)!